September 24, 2021 - Achawlaymyar
တစ်လ သိန်းတစ်ထောင်ဝင်နေတဲ့ ပယောဂဆရာမ
September 24, 2021 by Achawlaymyar
စင်ကာပူမှာ တစ်လသိန်းတစ်ထောင်နီးပါးဝင်တယ်ဆိုတဲ့ ထူးထူးဆန်းဆန်းအသက်မွေးသူတစ်ယောက်အကြောင်းပြောပြအုံးမယ်။ Bambi Leong Kai Mei ဆိုတဲ့ကလေးမအကြောင်းကို ခေတ်သစ်စုန်းပယောဂဆရာမအဖြစ် ဟိုနားဒီနားမှာဖတ်ရတာကြာပြီ။ သူ့ကို online မှာ DarkWitchBambi လို့ခေါ်ကြတယ်။ ဒီတစ်ခေါက် Sim Lim Square ရောက်မှသူ့ဆိုင်ရှေ့သွားပြီး ကေပိုးအုံးမယ်။ #02-28 မှာတဲ့။ ဆိုင်နာမည်က The Love Witch တဲ့။ သူ့မှာ online shop ရော၊ ဗေဒင်ဟောခန်းရောရှိတယ်။ Bambi Leong Kai Mei ဟာ ဟယ်ရီပေါ်တာတို့လို ဟော့ဝပ်စ်စုန်းဝိဇ္ဇာမှော်ပညာ သင်ကျောင်း The Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry ထွက်မဟုတ်ဘူး။ Bambi က National University of Singapore … Read more
လမ်းခွဲပြီးနောက်ပိုင်း လုံးဝမလုပ်သင့်တော့တဲ့ အချက် (၁၀) ခု
၁။ ကလဲ့စား ချေမယ်လို့ စိတ်ကူး မနေပါနဲ့ မိမိကို လမ်းခွဲခဲ့တဲ့သူကို ရန်သူအဖြစ် သဘောထားမယ်လို့လည်း တွေးမနေပါနဲ့ ။ ဒီအတိုင်းသာ ထားလိုက်ပါ ။ သင့်ကို သူက ကျောသွားတယ်လို့ တွေးပြီး တနုံ့နုံ့ ဒေါသတွေ ထွက်ပြီး ကလဲ့စားချေဖို့ ပလန် ချမနေပါနဲ့ ။ သင်သိထားရမှာက ကျွန်တော်တို့ ဖြတ်သန်းနေတာ တကယ့် လက်တွေ့ဘဝကြီးပါ ။ တရုတ်သိုင်းကား ရိုက်ကူးနေတာ မဟုတ်ပါဘူး ။ ဒီတော့ ဘာမှ ထွေထွေထူးထူး တွေးတောမနေပါနဲ့ ။ သင့်အပေါ်မှာ သူ အမှားတွေ လုပ်ခဲ့ရင်တောင် ခွင့်လွှတ်ပေးလိုက်ပြီး သင်ဟာ သဘောထားကြီးသူ တစ်ယောက်ဖြစ်ကြောင်း သက်သေ ပြလိုက်ပါ ။ ၂။ အဆင်ပြေပါတယ် ဆိုပီး မညာပါနဲ့ … Read more
ကိုယ်ဝန်ကြီးနဲ့မို့ မလုပ်ပါနဲ့ပြောတာကိုတားမရ၍ မခံနိုင်တဲ့အဆုံးရပ်ကွက်ရုံး တိုင်ကြားခဲ့ရတဲ့အဖြစ်
ကိုယ်ဝန်ကြီးနဲ့မို့ မလုပ်ပါနဲ့ပြောတာကို တားမရ၍ မခံနိုင်တဲ့အဆုံး ရပ်ကွက်ရုံး တိုင်ကြားခဲ့ရတဲ့ အဖြစ်“မရဘူး….ရှင့်ကို ရာအိမ်မှူးနဲ့ကို တိုင်မှာ” “မိန်းမကလည်းကွာ… ငါက ချစ်လို့စတာကို လာပါ ပြန်ရအောင်” “မပြန်ဘူး မပြန်ဘူး… ရှင့်ကို တိုင်ကိုတိုင်မှာ အဲဒါမှ ရှင် နောက်မလုပ်ရဲမှာ”ရုံးရှေ့က ဆူဆူညံညံ အသံတွေကြောင့် ဘာဖြစ်တာလဲဆိုပြီး ထွက်ကြည့်မိတော့ မျိုးချစ်နဲ့ သူ့မိန်းမ ပေါက်ကြီးပေါက်ကြီးဆိုတာက တစ်နှစ်တစ်ယောက် မှန်မှန်မွေးနေကျမို့ ပေါက်ကြီးလို့ခေါ်တာ။ အမြဲတမ်း လင်မယားတကျက်ကျက်နဲ့ ရန်ဖြစ်နေတာတောင် ပေါက်ကြီးတို့လင်မယားက တစ်နှစ်တစ်သားတော့ပုံမှန်ပေါက်နေကျအခုလည်း ကလေးတစ်ယောက်က လက်မှာ တွဲလောင်းဆွဲလို့ ဗိုက်ထဲမှာက တစ်ယောက်နဲ့…အဲဒါလည်း ခုထိ အဖြေထုတ်လို့ မရသေးတဲ့ ပုစ္ဆာ “ရာအိမ်မှူးရေ… ရာအိမ်မှူးတပည့်နဲ့ကျွန်မကို ကွာရှင်းပေးပါ” “ဘာဖြစ်လာပြန်ပြီလဲဟာ နင်တို့လင်မယားကလည်း အမြဲတမ်းရန်ဖြစ်မယ်လို့များ တွေးထားသလား… ကဲ ကဲ….ရုံးခန်းထဲလာခဲ့ကြ” လင်မယားနှစ်ယောက် … Read more
Crush ကို ဖွင့်ပြောဖို့ ရှက်နေတဲ့သူတွေကို ဝန်ဆောင်မှုပေးမယ့် ကုမ္ပဏီ
Crush ကို ဖွင့်ပြောဖို့ ဆိုတာ ရင်တုန်ပန်းတုန် ဖြစ်စရာကိစ္စပါပဲ။ အထူးသဖြင့် သင့် crush က ဘယ်လို သဘောထားရှိလဲ ဆိုတာ မသေချာတဲ့ အချိန်မျိုးမှာပေါ့။ crush က ငြင်းလိုက်မယ်ဆိုရင် သင်ဟာ အသည်းတွေလည်း ကွဲ၊ အရှက်တွေလည်း ကွဲနိုင်ပါတယ်။ ရိုးရိုးသားသား ပြောရရင် အသည်းကွဲတဲ့ ခံစားချက်က ကမ္ဘာပေါ်မှာ မကောင်းဆုံး ခံစားချက်ပါပဲ။ အဲဒါကြောင့် crush ကို ဖွင့်ပြောရာမှာ အောင်မြင်တဲ့ အခွင့်အရေးတွေကို အကောင်းဆုံး အသုံးချနိုင်ဖို့နဲ့ ကျဉ်းကျပ်တဲ့ အခြေအနေကနေ ထွက်နိုင်ဖို့ ဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့ ကုမ္ပဏီတစ်ခု ဂျပန်နိုင်ငံမှာ ရှိပါတယ် ။ ကုမ္ပဏီရဲ့နာမည်က Kokunavi လို့ခေါ်ပြီး ” အချစ်ကို ဖွင့်ပြောခြင်း ” ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်နဲ့ … Read more
အောင်လရဲ့ သူငယ်ချင်း မာတင်ငုယင်ကတော့ ပထမအချီမှာတင် အလဲထိုးခံရ (ရုပ်သံ)
မာတင္ငုယင္ ပထမအခ်ီမွာတင္ အလဲထိုးခံရ ေအာင္လရဲ့ သူငယ္ခ်င္း မာတင္ငုယင္ကေတာ့ ပထမအခ်ီမွာတင္ အလဲထိုးခံရ မာတင္ငုယင္ရဲ့ ညာလက္သီးဟာ သူ႔ကို ႏွစ္ထပ္ကြမ္းခ်န္ပီယံျဖစ္ေစခဲ့သလို ခုညာလက္သီးကဘဲ သူ႔ကို ဒုကၡေပးလာတာလားလို့ေတာင္ ထင္မိပါတယ္။ မာတင္ဟာ သူ႔ရဲ့အားျပင္းတဲ့ ညာလက္သီးကို အျမဲေသခ်ာ set up လုပ္ၿပီး ထိုးတတ္တဲ့ဖိုက္တာပါ။ ဒါေပမယ့္အရင္ပြဲမွာလည္း ညာလက္သီးနဲ႔ ေလာၿပီး ပြဲသိမ္းဖို့ ႀကိဳးစားရင္း အလဲထိုးနိုင္ခဲ့တာပါ။ ဒီပြဲမွာေတာ့ မာတင္ငုယင္ကမေလာေပမယ့္ ၿပိဳင္ဖက္က မာတင္ရဲ့ ထိုးတဲ့ပုံစံကို ခ်ိန္သားကိုက္အမိဖမ္းနိုင္ခဲ့ပါတယ္။ မာတင္ဟာ ဘယ္အေယာင္ျပၿပီး ညာလက္သီးအျပင္းစားထိုးဖို့ ႀကံခဲ့ေပမယ့္ ကင္ဂ်ယ္ေဝါင္က ခ်ိန္သားကိုက္ ညာလက္သီးႀကိဳထိုးနိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီပြဲမွာ ကင္ဂ်ယ္ေဝါင္ဟာ စိတ္ရွည္ရွည္နဲ႔ မာတင္ရဲ့ ဟာကြက္ျဖစ္သြားတဲ့ ေနရာကို အမိဖမ္းနိုင္ခဲ့တယ္လို့ဘဲ ဆိုရပါမယ္။ မာတင္ရဲ့ game plan ေကာင္းေကာင္းအလုပ္ျဖစ္ေနခဲ့ေပမယ့္ … Read more
၂၄.၉. ၂၀၂၁ ရက်နေ့ (မိုးလေဝသ အခြေအနေ )…..
၂၄.၉. ၂၀၂၁ ရက်နေ့ (မိုးလေဝသ အခြေအနေ ) မွန်းလွဲ ၁၂ နာရီ ၃၇ မိနစ် မြန်မာတစ်ပြည်လုံး မိုးတိမ်တောင်ဖြစ်ထွန်းမှုအခြေအနေ ။ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနှင့်ကချင်ပြည်နယ်တို့တွင်တိမ်အသင့်အတင့် ဖြစ်ထွန်းနေပြီး ကျန်တိုင်းဒေသကြီးနှင့်ပြည်နယ်တို့မှာ တိမ်ထူထပ်စွာ ဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်။ တိုင်းနှင့်ပြည်နယ်(၁၄)နေရာအတွက် မနက်ဖြန်နံနက်အထိမိုးရွာသွန်းနိုင်မှု ခန့်မှန်းချက်ကချင်ပြည်နယ်အတွက်ခန့်မှန်းချက်။ နေရာကွက်ကျားမိုးရွာသွန်းနိုင်ပါတယ်။ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး အထက်ပိုင်းနှင့် အလယ်ပိုင်းမှာ နေရာကွက်ကျား အောက်ပိုင်းမှာနေရာစိပ်စိပ် မိုးရွာသွန်းနိုင်နိုင်ပါတယ်။ ချင်းပြည်နယ် နေရာကျဲကျဲ မိုးရွာသွန်းနိုင်ပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး နေရာစိပ်စိပ် မိုးရွာသွန်းနိုင်သလို နေရာကွက်ပြီးလဲ မိုးကြီးနိုင်ပါတယ်။ နေပြည်တော်တွင် နေရာစိပ်စိပ် မိုးရွာသွန်းနိုင်နိုင်ပါတယ်။ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး နေရာစိပ်စိပ် မိုးရွာသွန်းနိုင်သလို နေရာကွက်ပြီးလဲ မိုးကြီးနိုင်ပါတယ်။ ရှမ်းပြည်နယ် နေရာကျဲကျဲ မိုးရွာသွန်းနိုင်ပါတယ်။ ရခိုင်ပြည်နယ် ​နေရာစိပ်စိပ် မိုးရွာသွန်းနိုင်သလို နေရာကွက်ပြီးလဲ မိုးကြီးနိုင်ပါတယ်။ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး နေရာစိပ်စိပ် … Read more
ဗြိတိန်ရဲ့အသက်အငယ်ဆုံးစွန့်ဦးတီထွင်သူလို့နာမည်ပေးခံခဲ့ရတဲ့ အသက် ၆ နှစ်အရွယ်ကောင်လေး Alfie Bradley ဟာ မကြာသေးခင်ကမှ အာရုံစိုက်မှုများစွာရရှိခဲ့ပြီး နေရာတိုင်းရှိ netizen တွေဆီကနေ လေးစားမှုများစွာကိုပါ ရရှိခဲ့ပါတယ်။ စွဲမက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့ကောင်လေးဟာ သူ့လို့အသက်အရွယ်မှာ သူ၏ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးကို စတင်လုပ်ဆောင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ အစီရင်ခံစာများအရ ကောင်လေးရဲ့ Alfred’s Grass Cutting Services (မြက်ရိတ်ပေးတဲ့ဝန်ဆောင်မှု) ကို lockdown ကာလအတွင်းတည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်။ သူဟာ သူ၏ကြိုးစားမှုမှဝင်ငွေရသည့်အခါတိုင်း ၎င်းကို သိမ်းဆည်းထားတတ်ပြီး သူ့လုပ်ငန်းကိုပိုမိုတိုးတက်စေဖို့ရာအတွက်သာ ၎င်းကို ထုတ်သုံးလေ့ရှိပါတယ်။ အမှန်တော့ သူဟာ ၎င်းငွေများဖြင့် ပိုကောင်းတဲ့မြက်ရိတ်စက် ၊ ညှပ်စက်နဲ့ ဖိအားလျှော်စက်တို့ကို ၀ယ်ယူထားနိုင်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ . ‘ ထို့အပြင် သူဟာ သူ့စိတ်ကြိုက်ယူနီဖောင်းကိုလည်း ဖန်တီးထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ Redruth မြို့မှမွေးဖွားလာခဲ့တဲ့ Alfie ဟာ အဖေဖြစ်သူ အသက် … Read more
သံဃာ၊ သီလရှင်၊ သာမဏေများ ဧည့်စာရင်းတိုင်ကြားရန် အမိန့်ထုတ်
သံဃာ၊ သီလရွင္၊ သာမေဏမ်ား ဧည့္စာရင္းတိုင္ၾကားရန္ စစ္ေကာင္စီခန႔္ သာသနာေရးဝန္ႀကီးဆိုသူကိုယ္တိုင္ အမိန႔္ထုတ္ျပန္လိုက္ပါတယ္။ ရန္ကုန္၊စက္တင္ဘာ ၂၄ ႏိုင္ငံတစ္ဝန္း ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း၊ သီလရွင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ သီတင္းသုံးေနသည့္ သံဃာ၊ သီလရွင္ ၊ သာမေဏမ်ား၊ လာေရာက္တည္းခိုေနထိုင္သည့္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားအားလုံး ဧည့္စာရင္း တိုင္ၾကရန္ စစ္ေကာင္စီခန႔္ သာသနာေရးဝန္ႀကီးဟုဆိုသာ ကိုကိုက စက္တင္ဘာလ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုး၍ အမိန႔္ တစ္ရပ္ထုတ္ျပန္သည္။ အဆိုပါ အမိန႔္ဥည္ ႏိုင္ငံေတာ္သံဃမဟာနာယက(မဟန)၏ ၫႊန္ၾကားခ်က္တစ္စုံတစ္ရာမရွိဘဲ သာသနာေရးဝန္ႀကီးဆိုသူက ၎၏ သေဘာဆႏၵဲဖင့္ သာသနာကိုဖိႏွိပ္ရန္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖင့္ ရဟန္းသံဃာမ်ားကိုပါ ဧည့္စာရင္းတိုင္ခိုင္းေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲေလးမွ သံဃာေတာ္တစ္ပါးက မိန႔္ၾကားသည္။ စစ္ေကာင္စီခန႔္ ဝန္ႀကီးဆိုသူ၏ အမိန႔္အရ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း၊ သီလရွင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေနထိုင္သီတင္းသုံးသည့္ မည္သူမဆို ဧည့္စာရင္း တိုင္ၾကားရမည့္ အေျခအေနရွိေနေၾကာင္း၊ မူလ … Read more
ဒီရာသီဖွား (၅) ခုကတော့ လိုချင်ပြီဟေ့ ဆိုရင် ဘယ်လိုမှကို တားမရတော့ဘူး
တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်တယ်၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကျိုးအတွက်ပဲ ကိုယ်ကြည့်တယ်လို့ အပြောခံလိုက်ရရင် ဘယ်သူမဆို စိတ်တိုသွားတတ်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လူတိုင်းဟာ အနည်းနဲ့အများတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကျိုးအတွက် ကြည့်တတ်ကြတာချည်းပါပဲ။ နည်းတာနဲ့ များတာပဲ ကွာသွားတတ်တာပါ။ ခုပြောပြမယ့် ရာသီဖွား (၅) ဦးကတော့ အခြား ရာသီဖွား တွေထက် ပိုတစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်ကြပါတယ်။ အဲ့ဒီရာသီဖွား (၅) ဦးကတော့ Aries – မိဿရာသီဖွား (မတ်လ ၂၁ ရက် – ဧပြီလ ၁၉ ရက်) မိဿရာသီဖွားတွေဟာ သူတို့လိုချင်တာကို ရအောင် ယူတတ်ကြပါတယ်။ ဒါဟာကောင်းတဲ့အချက်မှန်း သင်လက်ခံပြီးသားပါ။ ဒါပေမယ့် တစ်ခုရှိတာက ဒီရာသီဖွားတွေဟာ ငါ့ကိုအရင်ဆုံးဆိုတဲ့ စိတ်ဓာတ်ရှိပါတယ်။ ဥပမာ သင်ဟာ ဈေးဝယ်စင်တာ မှာ ကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုရှိလို့ ဒီပစ္စည်းကို လိုချင်တယ်ဆိုပါစို့။ သင်နဲ့အတူ မိဿ … Read more
ခင်ပွန်းခြေရှုပ်နေလို့ဆိုပြီး ဘုန်းကြီးထံ အကူညီသွားတောင်းမိလိုက်သောအခါ
ခင်ပွန်းခြေရှုပ်နေလို့ဆိုပြီး ဘုန်းကြီးထံအကူညီသွားတောင်းမိတဲ့ အမျိူးသမီးရဲ့အဖြစ် အမျိုးသမီးတစ်ဦးဟာ သူ့ခင်ပွန်းသည် ဖောက်ပြန်နေတာကို သိလိုက်ရပါတယ်။ စိတ်ထိခိုက်ပြီး သူ့ဘဝကို ဘယ်လိုရှေ့ဆက်ရမယ်ဆိုတာ မသိတော့တာကြောင့်တောင်တစ်လုံးပေါ်မှာ သီတင်းသုံးတဲ့ ပညာရှိဘုန်းတော်ကြီးထံကနေ အကြံဉာဏ်ရယူဖို့ ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ လမ်းလျှောက်ခရီး၊ တောင်တက်ခရီးတွေအပါအဝင် ရက်အနည်းငယ်သွားပြီးတဲ့နောက်တောင်ထိပ်မှာ သီတင်းသုံးနေတဲ့ ဘုန်းတော်ကြီးထံ ရောက်သွားပါတယ်။ တပည့်တော်မရဲ့ဘဝတစ်ခုလုံးမှာ သူ့အတွက်ပဲ အချိန်ပေးခဲ့ပါတယ်။ နုပျူ ိမှုတွေကိုရင်းပြီးသူ့အနားမှာပဲ နေခဲ့တယ်။ သူ့ကို ဂရုစိုက်ပြီးလည်း ပြု စုခဲ့တယ်။ ခုတော့ သူက တပည့်တော်မထက်ငယ်ရွယ်တဲ့သူကို ရွေးသွားပြီ။ တပည့်တော်မမှာ အခု ဘာမှမရှိတော့ဘူး။ဘာဆက်လုပ်ရမှန်းလဲ မသိတော့ဘူး”လို့ ဘုန်းတော်ကြီးကို လျှောက်လိုက်ပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာပဲ ဘုန်းကြီးက အမျိူးသမီးကို ကွတ်ကီးတစ်ခုစားဖို့ လှမ်းပေးလိုက်ပါတယ်။စားပြီးတဲ့အခါ အမျိုးသမီးကို “အရသာကောင်းလား”လို့ မေးလိုက်ပါတယ်။ အမျိုးသမီးက “တင်ပါ့.. ကောင်းပါတယ်ဘုရား”လို့ ဖြေတဲ့အခါ “နောက်တစ်ခုယူဦးမလား”လို့မေးလိုက်တဲ့အခါ “ယူပါ့မယ်.. … Read more